यस्तो बन्यो साम्राज्ञीको ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ र आँचलको ‘ब्ल्याक’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह र डेब्यु अभिनेता धिरज मगर स्टारर ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’ ले आफ्नो टिजर रिलिज गरेको छ। बिहिबार एक कार्यक्रम गर्दै फिल्मको टिजर रिलिज गरिए ...
मेरिनाले जितिन मिस नेपाल आईडलको ताज
२०७५ असार १२ गते
काठमाडौं । एमाजोन ईन्टरटेन्मेन्ट प्रालिको आयोजनामा भएको बौदिक एबं सौन्दर्य प्रतिस्प्रधा ‘मिस नेपाल आईडल २०१८’ उपाधी धरानकी मेरिना लिम्बुले जित्न सफल भएकी छन् । साेमबार भएकाे ...
रुचि र सुजताको ‘रातो सारी....’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । हिन्दू महिलाहरुको महान चार्ड तिज नजिकै गर्दा तिजका गीतहरु बजार आउन थालेका छन् । यतिखेर तिजका गीतहरु रेकर्डिङ र छाँयाङ्कन धमाधम हुन थालेका छन् । यसै क्रममा रुचि घिमिरे र सुजता केसीले ...
काठमाडौं । राजबहादुर सानेको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्म ‘वीराङ्गना’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। असार २९ गते रिलिज हुने फिल्मको आइतबार ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक ट्रेलरल ...
काठमाडौं । पुर्णेन्द्रु झाले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘चौका दाउ’ मंसिर १४ गतेबाट रिलिज हुने भएको छ । नायिका बर्षा राउत मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रमा राउतको भन्दा पनि आइटम डान्स ...
काठमाडौं । सानै देखिको चाहना कलाकार र समाजसेवि बन्ने चहाना बोकेकी नायिका उषा खनाल अहिले यहि क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेकी छन् । पछिल्लो समय व्यस्त रहेकी नायिका खनालले विगत आधादशक देखि नेपा ...
घमण्डले ओरालो लाग्दै गायिका अञ्जु पन्त
काठमाडौं । ‘तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र...’ यो गीत अञ्जु पन्तको जीवनमा टर्निङ प्वाइन्ट ल्याएको गीतका रुपमा चिनिन्छ । तर, गायिका पन्तले काठमाडौंमा आयोजित आफ्नो एकल साँझ कार ...
पूर्व मिस ईण्टरनेसनल शाहद्धारा ब्यूटीपार्लरको उद्घाटन
ईटहरी । पूर्व मिस ईण्टरनेसनल नीति शाहले एक मेकअप स्टुडियोको उद्घाटन गरेकी छन् । लामो समयदेखि इटहरीमा सञ्चालित रुपकला ब्युटिपार्लरकि सञ्चालिका मनिता तामाङ्गले आफ्नो &lsquo ...
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अहिलेसम्म पनि सिंगल नै छिन् । प्रियंका ३६ वर्ष पुगिसकिन र पनि सिंगल नै छिन् । तर, पछिल्लो समय उनी अफेयरमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ...
काठमाडौं । ‘डि सिने अवार्ड’ को दशौं संस्करण बिहिबार सम्पन्न भएको छ । अवार्ड कार्यक्रममा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड ‘कृ’को भागमा पर्यो भने नायकतर्फ फिल्म ‘कृ’ बाटै अनमो ...
विश्वका कान्छा निर्देशक सौगातको ‘हैरान’ प्रदर्शनमा
काठमाडौं । विश्वकै कान्छा निर्देशक सौगात विष्टको निर्देशनमा तयार भएको फिल्म ‘हैरान’ आज (शुक्रबार) बाट नेपालभर प्रदर्शनमा आएको छ। ‘हैरान’ ले आजबाट सोलो (एकल) प्रदर्शनको यात्र सु ...
'मेरो संसार उज्यालो' बजारमा (भिडियो सहित)
काठमाडौं । मौलिक गीत संगीतको रचना ओझेलमा परिरहेको बेला नेपालको परिस्थिति अनुसारको भाकाहरुलाई बजारमा ल्याउने क्रममा देवी म्युजिक सोलुसन प्रालीको प्रस्तुतिमा गायिका पुर्णकला विसी र गायक बल बहादुर ...
हिम्मतवालीपछि मालिकाको निर्देशन गर्दै रेखा
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘मालिका’को छायांकन सुरु भएको छ। सोमबार बिहान पशुपतिमा पूजाआजा गर्दै फिल्मको सुटिङ सुरु भएको हो। बालुवाटारबाट छायांकन सुरु गरिएको यस फिल्मलाई रेखा आफैँले निर्देशन ...
सेक्सी दीपिकालाई सुहाउला द्रौपदीको रोल ?
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता आमिर खानले बनाउन लागेको फिल्म ‘महाभारत’ मा सेक्सी नायिकाको छवी बनाएकी दीपिकाले द्रौपदीको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकी छन् । आमिरले श्रीकृष्णको भूमिका गर्नेछन् भने दीप ...
प्रियंकालाई धम्की दिने को ?
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले उनका फ्यान मध्ये एक जना अपरिचित व्यक्तिले धम्कीपूर्ण चिठि दिएको खुलासा गरेकी छन् । फ्यानबाट धम्कीपूर्ण पत्र पाएपछि उनका बाबुले कमलपोखरी प्रहरीलाई जानकारी गराएका ...
काठमाडौं । डिजिटल म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतीमा कर्णविर शाहीको लोक सौगात 'केटी मै ध्यान जाने' गीतमा गायक कर्णविर शाही र गायिका राधिका हमालको लोकदोहोरी एल्बम बजारमा आएको छ । किशोर अव ...
काठमाडौं । अभिनेत्री आँचल शर्माका अधिकांश फिल्म फ्लप छन् । आँचल सुन्दर छिन् । तर, उनको अभिनयले आफ्नो रुपको सुन्दरता जस्तै गरेर जादु देखाउन सकेन । ‘शत्रु गते’ हिट भएपनि आँचलको भूमिका कतै पन ...
मिस नेपालको ताज हेटौंडाकी खतिवडालाई
काठमाडौं । २४ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै यो बर्षको मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि शृङखला खतिवडाले जितेकी छिन् । हेटौंडाकी खतिवडाले जितेकी हुन् । उनलाई गत वर्षकी मिस नेपाल ...
श्रृङ्खला बनिन मिस नेपाल २०१८
काठमाडौं । मिस नेपाल वल्र्ड २०१८ को उपाधि श्रृङ्खला खतिवडा ले जितेकी छिन् । प्रतिस्पर्धामा सहभागी अन्य २४ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले उपाधिमाथि कब्जा जमाएकी हुन् । प्रतिस्पर्धाका प्रमुख निर्णायक ग ...
काठमाडाैं । ‘द दबंग टुर’का आयोजक ओडीसी इन्टरटेन्टमेन्टले बलिउड कलाकारहरु आएर टुँडिखेलमा कार्यक्रम गर्ने भन्दै करोडौं उठाइसकेको छ । तर, सलमान नेपाल आउने भने अझै निश्चित भएको छैन । अझै पनि ओ ...
८० हजार धरौटीमा छुटे सलमान
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सलमान खान भारू ५० हजार अर्थात नेपाली ८० हजार धरौटीमा छुटेका छन्। गत बिहिबार कोर्टले उनलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। उनलाई कालो हरिण सिकारको मामिलामा सजाय दिइएको हो। उनले ...
काठमाडौं । भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । कालो हरिणको शिकार गरेको मुद्दामा उनलाई जोधपुर अदालतले बिहिबार पाँच वर्ष कैद र एक करोड जरिवाना सुनाएको हो । सलमानलाई तत्कालै हिरासत ...
अन्तत झुकिन गायिका मल्ल
काठमाडौं । देउडा गायिका चाँदनी मल्लले माफी मागेकी छन् । जातीय रुपमा अन्य समुदायलाई होच्याएर सामाजिक संजालमा निकै आलोचना खेपेपछि मल्लले माफी मागेकी हुन् । मल्लले ‘बाडुली’ नामक कार्यक्रममा ग ...
ओलीको भारत भ्रमण टोलीमा कसरी अटाए महानायक हमाल ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण यहि २३ गते हुँदैछ । दुई दिने उक्त भ्रमण यस वर्ष अलि फरक हुने भएको छ । अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, प्रध ...
यस्तो छ केकीको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ (भिडियो सहित)
काठमाडौं । अभिनेत्री केकी अधिकारीले पहिलो पटक निर्माण गरेको चलचित्र ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । फिल्मका निर्देशक विशाल भण्डारी हुन्। फिल्ममा केकी र बिनोदसंगै प्रियंका ...
काजिश र करिष्माबीच यसरी बढ्यो माया (भिडियो सहित)
आर पोखरेल/ विराटनगर। लामो समयदेखि लोक दोहोरी क्षेत्रमा आबद्ध सफलता म्युजिक प्रालीको प्रस्तुतीमा गायक राज ठोकरको डान्सिङ लोकदोहोरी गीत 'बढ्ने माया' बोलको म्युजिक भिडियो युट्युबबाट सार्वजनिक भएको ...
चोरीको आरोपमा फिल्म ‘कृ’ का निर्माता सुवास गिरी पक्राउ
काठमाडौं । अभिनेता भुवन केसीद्वारा निर्माण गरिएको फिल्म ‘कृ’ का निर्माता सुवास गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले मंगलबार उनलाई पक्राउ गरेको हो। ...
काठमाडौं । महानगरीय अपराध महाशाखाले हिन्दी फिल्ममा खेलाउने भनेर ठगी गर्ने २ जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले २४ वर्षीय विजय ठाकुर र करिष्मा बोहारा त्रिवेदीलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अ ...
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको सांस्कृतिक नगरी पनौतीमा स्वरसम्राट नारायणगोपालको स्मृतिमा बृहत सांगीतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। पनौतीका गायक तथा सङ्गीतकार सुरेन्द्र श्रेष्ठको एकल गायनमा कार्यक्रम सम्पन्न भ ...
कंगनालाई धोकै धोका
काठमाडौं । बलिउडमा ‘कंगना रनोट’ सफल अभिनेत्री हुन् । उनको व्यावसायिक जीवनले नयाँ सफलताको उचाई छुँदै गइरहेको छ । तर, कंगनाको व्यक्तिगत जिन्दगी भने सँधै विवादमा रह्यो । कंगनाले थुप्रै युवकसँ ...
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री जया पर्दा व्यक्तिगत भ्रमणको सिलसिलामा काठमाडौं आइपुगेकी छिन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा गरेको पुरानो भाकल पूरा गर्न नेपाल आएको उनले बताएकी छिन् । उनी स्वदेश फर्किसकेकी छन् । मंगलब ...
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं अहिले नायक भुवन केसी र निर्माता सुवास गिरीको पर्खाइमा छन् । यी दुवै निर्माता रहेको फिल्म ‘कृ’मा राखिएको पुरानो फिल्म ‘सम्झना’को ...
काठमाडौं । निर्देशक प्रबिन थापाको निर्देशनमा ‘नशालु हेराई...’ बोलको गित सार्बजनिक भएको छ । उमेश गुरुङको लय र शब्द रहेको उक्त गितमा आरुशी मगर र निर्देशक थापाको धमाकेदार नृत्य देख्न पाईन्छ । ...
काठमाडौं । केन्द्रिय अनलाईन रोधी ब्यवस्थापन संघ नेपालको आयोजनामा भएको प्रथम केन्द्रिय अनलाईन लोकदोहोरी अवार्ड २०७४को अनलाईन कलाकार छनौट प्रक्रिया भईरहेको छ । २६ जना सहभागी मध्ये निर्णायक मण्डलबाट २० ज ...
काठमाडौं । म्युजिक भिडियो निर्देशकद्वय शिव बिक र अशोक बिकले छ महिनाको घर भाडा नतिरेर बेपत्ता भएको खुलासा भएको छ । काठमाडौंको अनामनगरस्थित घट्टेकुलो चोकमा आफिसका लागि फल्याट भाडामा लिएर बिकले भाडा नतिर ...
पोर्न स्टार सन्नी तीन सन्तानकी आमा ?
काठमाडौं । पोर्न स्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी जुम्ल्याहा बच्चाको आमा बनेकी छन्। उनले सेरोगेसी मार्फत आमा बनेकी हुन्। केहि समय अगाडि सन्नीले एक बालिकालाई धर्मपुत्री बनाएकी थिइन्। उनले इन्स्टा ...
कान्तिपुर आइडलको अन्तिम तयारी
काठमाडौं । सनराज इन्टरटेन्ट्मेन्ट प्रालिको आयोजनामा भैरहेको ‘कान्तिपुर आइडल’ खुल्ला गायन तथा नृत्य प्रतियोगिताको अन्तिम तयारी भैरहेको छ । लगभग एक हजार जना प्रतिस्पधीलाई पछाडी प ...
विप्लवको धम्कीसँगै सलमान नेपाल नआउने पक्का, के होला ‘दबंग द टुर’ ?
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फागुन २६ गते काठमाडौंमा हुने बलिउडका अभिनेता सलमान खानको कार्यक्रम विथोल्ने चेतावनी दिएसँगै बलिउड अभिनेता खानको नेप ...
काठमाडौंमा नेपाली हिरोइनहरुले यसरी मनाए होली (फोटो फिचर )
काठमाडौं । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली पर्व बिहीबार हिमाली एवम् पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने ...
विप्लवको धम्कीले सलमान खानको कार्यक्रम बिथोलिने संकेत, भारतमा समेत तरंग
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फागुन २६ गते काठमाडौंमा हुने बलिउडका अभिनेता सलमान खानको कार्यक्रम विथोल्ने चेतावनी दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको भातृसंगठन अख ...
‘द प्रिन्स’मा प्रिन्सको डेब्यु
काठमाडौं । चलचित्र ‘द प्रिन्स’को घोषणा गरिएको छ । राजधानीेमा एक कार्यक्रमबीच चलचित्र ‘द प्रिन्स’ को निर्माण घोषणा गरिएको हो । मदन घिमिरेको निर्देशनमा बिष्णु शिवाकोटीले चल ...
‘लाग्छ शुन्य आजकल’ सार्वजनिक( भिडियो सहित)
काठमाडौं । अभिनेतृ केकी अधिकारी र नायक, गायक एन.जे. सागर शाहले मोडलिङ्ग गरेको म्युजिक भिडियो ‘लाग्छ शुन्य आजकल’ युटुव मार्फत सार्वजनिक गरिएकोे छ । शिव गुरुङको स्वर रहेकोे &lsqu ...
काठमाडौं । राजधानीमा रात्रिकालीन व्यवसाय गर्दै आएकी अर्चना पनेरुले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर घरजम गर्ने तयारी थालेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको तस्बिर शेयर गरेर अर्चनाले त ...
श्रीदेवीको मृत्यु कोठामा रहेको बाथ टबमा डुबेर
नयाँ दिल्ली। बलिउड स्टार श्रीदेवीको मृत्युबारे नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ। दुबई पुलिसका अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्टले श्रीदेवीको मृत्यु होटलको कोठामा रहेको बाथ टबमा डुबेर भएको हो । एउटा विवाह समारोहमा सहभ ...